China Yakagadziriswa Dhizaini Yekuyambuka-kuyerera Towers yePower Generation, Yakakura-yakakura HVAC uye Maindasitiri Zvivakwa Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Yakasimudzira Dhizaini Yekuyambuka-kuyerera Towers yeiyo Simba Kugadzirwa, Hombe-yakakura HVAC uye Maindasitiri Zvivakwa
Aya akateedzana kutonhora shongwe anofarirwa dhizaini, yekuyambuka-kuyerera shongwe uye yakagadzirirwa maererano nevatengi zvinodiwa pane kuita, chimiro, dhiraivhu, simba rekushandisa, pombi musoro uye chinangwa mutengo.
Iwo anonyanya kukodzera kwazvo inorema maindasitiri kunyorera mune magetsi magetsi, zvinomera zvefetiraiza, petrochemical zvivakwa uye petroleum yekuchenesa uye huwandu hwakawanda hweshongwe nyowani hwakavakwa nemoto unodzosera fiberglass nekuda kwesimba rayo rakakura uye moto / ngura inopesana nemidziyo.
Iyo yakanyanyisa kusiyanisa renji tichifunga zvakasiyana chikumbiro chematanho. Iyo in-line tower ndiyo yakajairika dhizaini yezvakanaka zvikonzero, asi yakafanana mu-mutsara, kudzokera kumashure, uye kutenderera kumisikidza zvakare sarudzo kana chirongwa chehurongwa chichida imwe nzira.
Kugadziriswa kwese kutenderera kungave iri mhinduro kwayo kune shoma saiti.
Kugadzira iyo shongwe munzira ine mutsetse kunopa kurongedzwa pamwe nekushandisa kushoma kwesimba, kusanganisira yakaderedzwa fan fan simba uye yakaderera kupomba musoro. Funga nezve kupinda kweanopinda mumhepo kupinda, kukwirira kweshongwe nemutengo zvinoderedzwa.
Iyo yekumashure-yekumashure shongwe dhizaini inogona kukodzera mukati mesaiti kutadza kana zvisingaite kune ye-mu-dhizaini dhizaini. Uchienzanisa neyakarongeka mitsara, iyo fan fan uye yekupomba musoro zvese zvakawedzera izvo zvinotungamira kune yakakwira mutengo asi wakaderera wekushisa kugona.
Parallel In-mutsara Kugadziriswa
Kana zvisingaite kumisikidza shongwe mune imwe tambo, zvakanaka kupatsanura nekuronga shongwe kuita maviri kana anopfuura mayuniti akarongedzwa mune yakafanana mu-mutsara kumisikidzwa uchifunga zvinotevera mapoinzi:
Ichanyanya kudzikisa shongwe yekupomha musoro nekuparadzanisa nzvimbo yemhepo yepakati pakati pemeso maviri eshongwe.
Iyo inogona kudzikisira zvakanyanya mutengo weshongwe wakagoneswa neiyo yakaderedzwa nhare kukwirira uye ikawana kugona.
Iyo inoderedza iyo fan fan nekuwanazve yakarasika kushanda neese maviri mhepo inlet.
Iyo inoderedza yakaisirwa kureba nekushandisa iyo nzvimbo iri pakati peshongwe dzemapombi pombi, pombi, uye yekuwanira zvigadzirwa.
Iyo inovimbwa yakasimba yekupisa kugona nekucheka mweya inokwevera kuburikidza nekudonha mvura muhafu.
Kugadzikana kuri nyore uye mashandiro akaitwa nekupa iyo nzvimbo nemashongwe ari ega ari ega
Pashure: ICE Maindasitiri Emvura Softener Sisitimu Yekutonhora Shongwe Kunobva Mvura
Zvadaro: Round Bhodhoro Type Counter-kuyerera Kutonhora Towers
munda wakavakwa maindasitiri kutonhora shongwe
yakakurudzira dhizaini kutonhora shongwe
maindasitiri kutonhora shongwe yekugadzira magetsi